08 Julayi - 21 Julayi 2016
8 Julayi - 21 Julayi 2016 Iphephandaba lako laMAHHALA www.durban.gov.za
PRINCESS NKABANE SEKUSEMOME ukuqalwa kokwakhiwa kwengqalasizinda enkulu kuMasipala weTheku ebiza uR1.8 million okuhlelwe ukuba iqale ngonyaka ozayo. Uma le ngqalasizinda isiphothuliwe, baningi abantu baseThekwini abazokwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Kulindeleke ukuba iDolobha liqalise isigaba sesibili sohlelo lwalo lwamanzi olubiza uR1.8 million oluzobe lungolukhukuazi ngonyaka ozayo, 2017. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi uMasipala weTheku unengqalasizinda ehamba phambili ezeni lonke. INTATHELI YEMETRO IKomidi eliPhezulu loMkhandlu mhlaka 29 Juni liphasise uxhaso lwemali elinganiselwa kuR31 million emizamweni kaMasipala yokusheshisa ukusatshalaliswa kukagesi kanye nokuthuthukisa ingqalasizinda yawo ezingxenyeni zeTheku. Ngaphansi kwale phrojekthi, kuzokuba nezinhlelo eziningi okubalwa kuzo ukwakhiwa kweziteshi ezincane zikagesi, ukulungiswa nokuqiniswa kwezinhlelo zikagesi ezikhona nokufakwa kwezintambo zikagesi kanye nokunye. Izindawo ezihlonzwe ukuba zihlomule kule phrojekthi kubalwa kuzo iMayville, Verulam, uThongathi, Kennedy Road Transit Camp, Clare Hills, Reservoir Hills, Westville South, Kloof kanye nezinye ezisenkabeni yeDolobha. Njengamanje uMasipala weTheku uhlinzeka ngogesi abantu ababalelwa ku-700 000 ngaphansi kweTheku nezindawo ezilakhele. UKhansela uNigel Gumede, onguSihlalo weKomidi lokuHlaliswa kwaBantu neNgqalasizinda uthe ukuthuthukiswa kwengqalasizinda kubalulekile ngoba kuyindlela abaqinisekisa ngayo ukuthi uHlelo lukaMasipala lweNtuthuko eDidiyele luletha intuthuko yangomuso.
Uhlelo lukagesi lwezigidi
Ingqalasizinda yamanzi enkulu
OyiNhloko yoMnyango wezaManzi nokuThuthwa kweNdle, u-Ednick Msweli uthe lolu hlelo lwamanzi lwasempumalanga luzoqala eNtshanga luze lufinyelele naseNtuzuma. ?Lolu hlelo luzokwazi ukumelana nesidingo samanzi sawo wonke umuntu waseThekwini eminyakeni engu-30 ezayo.? UMsweli uthe lolu hlelo lwamanzi lungolubaluleke kakhulu ekuthuthukiseni umphakathi esifundeni saseThekwini. ?Lolu hlelo ngeke lugcine nje ngokuhlomulisa kwezomnotho kuphela, kodwa luzolekelela ekudaleni namathuba omsebenzi kubahlali baseThekwini.? Uthe ngaphansi kwalolu hlelo, kuzofakwa amapayipi ensimbi ashiselwe angaqala ku-0.5 metres kuya ku-1.6 metres ubude azofakwa kanye nalawo avele akhona kumanje. Imizila yala mapayipi izohamba igudle imigwaqo yaseThekwini ukusuka kuMlaas Road ize iyobhajwa eNtuzuma, Pinetown naseTshelimnyama. UMsweli uthe ithangi lesibili elaziwa ngokuthi yiWybank Break Presssure Tank seliya ngasemaphethelweni. princess.nkabane@durban.gov.za Isigaba sesibili sengqalasizinda samapayipi amanzi sika-R1.8m sizoqala ngo-2017. Isithombe: SITHUNYELWE
IVOTI LAKHO LIBALULEKILE, VOTA NGO-3 AGASTI
NONDUMISO MATHOMANE UMASIPALA weTheku unxenxa abahlali kanye nosomabhizinisi ukuba bahlanganyele ndawonye neDolobha ezinhlelweni zalo zokufukula labo abahlwempu njengoba uzokwethula izinhlelo zawo lapho uzobe uhlonipha iqhawe laseNingizimu Afrika uDkt uNelson Mandela. IDolobha lizogubha usuku lokuzalwa kukaMandela nezinkulungwane zabahlali baseThekwini, lapho kuzoba kunikezwa khona abantu izindlu, izihlalo zabakhubazekile kanye namaphepha asendlini encane (ama-pads). Ngenxa yokuthi iMandela Day evamise ukugujwa mhlaka 18 Julayi, ishayisana nokuqala kweNgqungquthela yeNgculazi ezobanjelwa eThekwini, iDolobha lizoyigubha mhlaka 17 Julayi iMandela Day.Imibhiyozo izoqala oThongathi ku-Ward 59, lapho abakwaSouth African Social Security Agency naboMnyango wezaseKhaya bezobe besiza isaguga esingenawo umazisi. Emuva kwalokho amabombo azobe eselibhekisa eMlazi, KwaMakhutha, Verulam, Mpumalanga naKwaMashu lapho iMeya uJames Nxumalo kanye nobuholi beDolobha bezokhipha amatayitela abantu abangaphezu kuka-1 600. UGogo uBetty uneminyaka engu-75 ongomunye wabazothola izindlu akakholwanga ezwa izindaba ezithi yena usezoba nendlu ethi yenu. Le mindeni yatholakala ngesikhathi iTheku kanye neSifundazwe benza uhlelo lwabo lwe-Operation Sukuma Sakhe. Imigubho izobe isidlulela eCornubia lapho imindeni engu-20 izosuswa emijondolo yasePlokwane eduze naseNewlands West iyofakawa eCornubia. Phakathi kwale mindeni kukhona nabantu ababili abadala abahlala ngaphansi kweBhuloho laseMngeni. ukuthola impesheni yaso. Ubuholi buzobe sebuya oHlange High School, eNanda lapho uMandela avota khona okhethweni lokuqala ngqa lwango-1994. nondumiso.mbuyazi@durban.gov.za
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natali, uWeziwe Thusi, Imeya yeTheku uJames Nxumalo kanye noSihlalo weKomidi loSizo oluPhumayo nezoMphakathi uKhansela uZandile Gumede bekhanyisa ilambu lokugubha impumelelo yeminyaka engu-16 yoHulumeni baseKhaya. Njengenxenye yamigubho abaholi beDolobha neSifundazwe bavakashele imindeni engu-700 esinezindlu. Umbiko ogcwele ukwikhasi 3. Isithombe: SITHUNYELWE
IYABONAKALA INTUTHUKO ETHEKWINI
Izindaba: Ikhasi 6 Izindaba: Ikhasi 3
SITHUTHUKISA UMKHAKHA WEZOLIMO